Sunday August 25, 2019 - 12:25:49 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Isbedello waaweyn oo dhanka maamulka ah ayaa lagasoo calaamadeeyay bartamaha iyo waqooyiga wadanka Suuriya halkaas oo sanadadii lasoo dhaafay ay ka dhaceen dagaallo culus.
Ciidamada Nidaamka Nuseyriga ah ee bishaar Al-asad iyo maleeshiyaad Shiico iiraaniyiin ah ayaa qabsaday baadiyaha waqooyi ee gobolka xammaah iyo magaalooyin dhaca koonfur bari gobolka Idlib.
Sida wararku sheegayaan ciidamadan cadowga ah oo dhanka cirka ay ka taageerayaan diyaaradaha dagaalka Ruushka ayaa qabsaday magaalada Muurik ee istiraatiijiga ah, lamasoo sheegin wax iska hor'imaadya ah oo ay lakulmeen Xulufada Al-asad.
Boqolaal katirsan ciidamada dowladda dabadhilifka Turkiga oo bara koontarool ku lahaa magaalada muurik ayaa fashil lakulmay kadib markii ay ciidamada bishara al-Asad ay qabsadeen magaaladan oo ay gacanta ku hayeen kooxaha mucaarad ah oo Turkiga xiriir laleh.
Inta badan barihii koontaroolka ee ay ku sugnaayeen ciidamada Turkiga ayaa gacanta isbaheysiga Ruushka galay waxaana kamid ahaa Khaan Sheykhuun iyo Tal Almaliix waxaa sidaas ku beenoobay sheegashadii aheyd in goobo dagaallada ka caagan laga hirgelinayo deegaannada mucaaradku maamulaan.